fooView bu ihe omuma di nma ma adighi ka ihe obula ohuru na nso nso a Akụkọ akụrụngwa
Echiche ọhụrụ na ụzọ ọhụrụ si emekọrịta Iji ekwentị gam akporo, nke a bụ ihe ngwa a kpọrọ fooView na-enye, nke sitere n'aka otu onye nrụpụta wetara nnukwu onye nyocha faịlụ na gam akporo 6 afọ gara aga. Njikwa ES Explorer.
Onye nrụpụta nke ike gwụrụ na ngwa ngwa mbụ ya, wee jiri echiche a magburu onwe ya akpọrọ fooView. Ọ bụ ezie na ikekwe onye na-eso ụzọ Foo Fighters, ngwa fooView na-ewetara anyị ụzọ dị iche iche iji soro ekwentị gam akporo anyị na-emekọrịta ihe jide a enyo nke ihuenyo ịchọọ, chekwaa ma ọ bụ tụgharịa asụsụ, ọ bụrụ na ọ bụụrụ na anyị ewerela ederede.
fooView bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ nwere ike ịkọwa ọrụ ya mana nke ahụ ịnwale ya ga-ewetara gị nso ihe ọ bụla ọ pụtara. Na-eji swipe n'akụkụ aka ekpe, hapụ ya maka sekọnd ole na ole na oge akara ngosi edo edo na-apụta, ị na-ese igbe dị ka a ga - asị na ị na - eji oke gị eme ya na desktọọpụ Windows.
Ozugbo emere nke a, nhọrọ atọ ga - egosi na ị ga - echekwa igbe ahụ ewere dị ka onyonyo, nyocha onyonyo / ederede ma ọ bụ ihe ọ bụ iji kesaa ya site na ngwa ndị ọzọ. Ihe omuma atu banyere ojiji ya bu mepee ngwa igwefoto iji jide ihe nke ahụ gosipụtara site na oghere, anyị na-enye nyocha ihe oyiyi ahụ na nsonaazụ ga-apụta ozugbo.
Nwere otutu mbak dị ka mmegharị ahụ iji mepee ngosi ngosi, ịmalite ngwa ahụ, laghachi ma ọ bụ ihe mmegharị ahụ iji malite ngwa ma ọ bụ ụzọ mkpirisi na weebụ.
una ngwa nke izizi na nka nke ahụ na-ewetara anyị ụzọ ọzọ iji soro gam akporo gị na-emekọrịta ihe. M wee sị, gbalịa ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ na mkpụrụedemede, ebe ọ ga-eju gị anya ihe enwere ike iji ekwentị gam akporo gị mee.
Budata fooView APK
Edere na Nzukọ XDA
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » fooView na-enye ụzọ ọhụụ dị mma iji soro ekwentị gam akporo gị na-emekọ ihe
Na gam akporo 6.0.1 na Note5 mgbe ị na-akpọghachi ihe edere ya na ihe ndekọ ederede fooView, a nụghị ụda ọ bụla, ọ bụ naanị foto vidiyo ka a hụrụ
Zaghachi Rebeca Gajardo